window ပြဿနာပူးတွဲတင်ပြထား / အသေးအဖွဲ
window ပြဿနာပူးတွဲတင်ပြထား / အသေးအဖွဲ3နှစ်ပေါင်း5months ago #316
ဟယ်လို! ငါ minimize လိုက်တဲ့အခါ FSX ဝင်းဒိုးကို (Software က Windows mode ကိုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်) နှင့်ကျွန်မတစ်ခုခုရှာထိုအခါမူကားငါပြန်ရချင်တယ် FSX ငါဝင်းဒိုးကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်ထိုအခါမူကားအရာခပ်သိမ်းအနက်ရောင်သွားလိမ့်မည်။ ဘာမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တချို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပဲရှိပါတယ်။ ဒီနှင့်ငါ့ကိုကူညီဖို့ပါ ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုသာ payware လေယာဉ် (PMDG 777, Aerosoft အဲယားဘတ်စ်ဆော့ဝဲအစုအဝေး) ပေါ်မှာဤပြဿနာနှင့် Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ် FSX အရှိန်။ ငါအရမ်းတချို့ဓါတ်ပုံတွေကိုထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
window ပြဿနာပူးတွဲတင်ပြထား / အသေးအဖွဲ3နှစ်ပေါင်း5months ago #317
ငါဤပြဿနာကိုကိုယ်အကြိမ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအမြင်ပြောင်းလဲသွားလျှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြုလုပ်သူ့ဟာသူထရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုမိနစ်စောင့်ဆိုင်းကူညီပေးသည်, သို့မဟုတ်ပါ။
window ပြဿနာပူးတွဲတင်ပြထား / အသေးအဖွဲ3နှစ်ပေါင်း5months ago #320
ဒါဟာ PMDG B737NGX အပေါ်နှင့်ငါ့ကိုမှဖြစ်ပျက် FSX acceleration ရွှေနှင့်ငါကစနစ်တကျဥစ္စာတူသောအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်အလုပ် could'nt ,, Key ကို AltGr ကနေတဆင့်ဝင်းဒိုးကိုမှ Sim မျက်နှာပြင်ကနေနိမ့်ဆုံးမှအကြှနျုပျ၏ပြတင်းပေါက် Enter ကို အသုံးပြု. နေစဉ်။ ငါအဘယ်သူအားမျှ payware လေယာဉ်ပျံပေါ်တူကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သို့သော် ,, ကအားလုံးကိုထုတ်ပြဿနာနှင့်အတူဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကြသည်။
window ပြဿနာပူးတွဲတင်ပြထား / အသေးအဖွဲ3နှစ်ပေါင်း5months ago #322
တကယ်တော့ငါပြီးသားဒီဖြေရှင်း။ ဤပြဿနာကိုရှိခြင်းသည်အခြားမည်သူမဆိုဒီ link ကိုသွား: c-aviation.net/fsx-tweak /fsx-cfg-Tweak-လမ်းညွှန် /
ထိုအရပ်မှက "UIAutomationCore.dll" ကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့်ရန် "HIGHMEMFIX = 1" add fsx.cfg ။ ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်ကရှာတှေ့နိုငျ fsx% appdata% / မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှ .cfg ဖိုင်တွဲ /FSX
window ပြဿနာပူးတွဲတင်ပြထား / အသေးအဖွဲ3နှစ်ပေါင်း5months ago #325
အဘို့ကောင်းသော link ကိုအင်ဖို ,,, FSX
သင်တို့အပေါ်မှာလျှင်ကြောင့်, ထို site ကို link ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ဘယ်သို့သောအားဖြင့် FSX သငျသညျလိုအပ်သော dont ရေနွေးငွေ့ကဒီဖိုင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
UIAutomationCore.dll - 32-bit မှာစနစ်များအတွက် 64-application ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်း DLL စာကြည့်တိုက်ဖိုင်။ သင်ကသင့်ရဲ့အဓိကအနေနဲ့အရပျကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် FSX (အခြားသူများအကြား) OOM အမှားများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖိုင်တွဲ။ အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး FSX Edition ကို Steam ။
0.188 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်